Allegri oo ka jawaab celiyay wararka sheegaya in uu tababare u noqon doono Manchester United – Gool FM
(Italy) 29 Dis 2018. Macalinka kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa ka jawaabay wararka sheegaya in uu tababare u noqon doono Manchester United xilli ciyaareedka soo socda.
Massimiliano Allegri ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Metro” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Weli waxaan heystaa sanad iyo badh ee ka harsan qandaraaskeyga, waan ku fiicanahay halkan, waxaan sameyneynaa waxyaabo muhiim ah”.
“Hada waxaan ku jirnaa December, waxaana wanaagsan inaan sugno ilaa iyo laga gaarayo bisha Juun ee soo aadan, waxaa jiri doona kulamo badan
“Waxaan arkay waxyaabo kadib ciyaarta kulankii ugu dambeeyay ee aan barbaraha galnay, si aan u aragno sida uu noqon doono kulanka beri aan kula ciyaari doono Sampdoria, laakiin waxaan heysanaa 50 dhibcood, mana lumin doono maalinta berito ah”.
“Kulanka Atalanta waxaan helnay natiijo aan caadi ahayn, sababtoo ah waxaan ku ciyaarnay 45 daqiiqo 10 ciyaaryahan, taasina ma ahan mid sahlan, sidaasi darteed waxaan helnay fursad aan ku badin karno”.
“Waqti xaadirkaan, ma ogi sida uu ku dhamaan doono kulanka beri, laakiin ma aanan sameynin qaladad badan, waxaan gaarnay 16 guul iyo 2 barbaro, waxaana heerka group-yada Champions League kaga dhameysanay booska koowaad”.
“Sidaas darteed waa qalad inaan sheegno in aan dhibaato ku jirno, laga yaabee shaqsiga sidaas sheegay in uu u yiri si kaftan ah”.
ARAG: Safafka ay Berito ku soo gali karaan Liverpool vs Arsenal.....(Kulan la wada sugayo)